EMUI 10.1 Global Beta: Terminallada cusbooneysiiya iyo sida loo sameeyo | War gadget
Paco L Gutierrez | | Mobiles
Huawei wuxuu bilaabayaa beta Lakabkaaga u-habeynta Android, waa inaadan sugin inaad gaarto dhammaan boosteejooyinkaaga ugu dambeeyay ee ka baxsan baaxadda cusub ee P40, oo lagu sii daayay noocaas. Haddii aad tahay milkiilaha terminal dhowaan ka yimid soosaaraha Shiinaha oo aad xiiseyneyso inaad si joogto ah u cusbooneysiiso, waa inaad u diyaargarowdaa inaad rakibto sida ugu dhakhsaha badan. EMUI 10.1: Nuqulkii Huawei P40 ee horudhaca ahaa wuxuu dhabaha u xaaraya in lagu sii fidiyo Shiinaha. Nidaam ay tahay inaad iska diiwaangeliso barnaamijka Huawei.
Tani maahan wax cusub tan iyo markii la sii daayay kasta oo weyn oo ka socda Huawei shirkadda badanaa waxay cusbooneysiisaa lakabka EMUI. Dayactirku wuxuu ka fogyahay dhinaca bilicsanaanta, sidoo kale howlaha iyo codsiyada; sidaa darteed had iyo jeer waxay yimaadaan iyagoo ku raran warar markii Huawei ay cusbooneysiiso taleefannada kale qadiim ah. Halkan waxaan ku sheegi doonnaa boosteejooyinka la jaan qaadi kara iyo tallaabooyinka la raacayo si loo helo.
1 EMUI 10.1 iyo Terminal la jaan qaadi kara
2 Maxaa ku cusub EMUI 10.1
2.1 Naqshad cusub
2.2 AppSearch: barnaamijyada Google
2.3 Celia, kaaliyaha dalwaddii ee Huawei
2.5 Shaashad wadaag
2.6 Shirkadda Huawei +
EMUI 10.1 iyo Terminal la jaan qaadi kara
Beta-ka noocaan software-ka ah horay ayaa loo sii daayay Shiinaha gudaheeda waxayna soo martay dhowr waji oo dhammaan boosteejooyinkii ugu dambeeyay ka hor inta aan la gaarin qaybta P40. Wadanka Aasiya waxay horeyba u heleen helitaanka beta bilicdiisa ugu sareysa laakiin dhamaan suuqyada adduunka ayaa weli ah wax walbana waa diyaar, taas oo noqon doonta mid deg deg ah, sida ay Huawei lafteeda xaqiijiso.
Dhammaan dadka haysta ebuteilladan iswaafajinaya waa inay kala soo bax barnaamijkan Huawei si aad u hesho marinna u siiso rakibaadda firmware tijaabo ah. Telefoonada u qalma mabda 'ahaan waa isku mid kuwa helay beta-ka EMUI 10.1 ee Shiinaha:
Huawei Mate 30 RS Naqshadeynta Porsche.
Arag sharaf 30.
Maamuus Muuqaal 30 Pro.
Arag sharaf 20.
Maamuus 20 Pro.
Kuwani waa boosteejooyinka laga helay beta-ka Shiinaha laakiin liiska adduunka wuu yara kala duwanaan karaa tan. Haddii aad leedahay mid ka mid ah taleefannadan, waad soo dejisan kartaa codsiga beta si aad ula tashato sii deynta EMUI 10.1 beta. Waxaa habboon in marar badan la iska hubiyo: kaqeybgalka betas marwalba wuu xadidan yahay. Si aad u soo dejiso arjiga beta, kaliya tag boggan Huawei. Haddii aad casrigaaga casriga ah ku cusbooneysiisay Android 10: soo dejiso laga soo xigtay.
Maxaa ku cusub EMUI 10.1
Waxaan si faahfaahsan u faahfaahin doonnaa qaar ka mid ah wararka ugu muhiimsan ee noocan cusub ee ka mid ah lakabaynta qaabeynta EMUI ay keeneyso oo sidan ayaad ku arki doontaa haddii ay mudan tahay in la tijaabiyo beta ama maya. Sida Haddii aadan helin wax ku soo jiito dareenkaaga, dhib uma lihid inaad sugto nooca ugu dambeeya ee ay tahay.
Gudiga xakamaynta aaladda ayaa dib u habeyn lagu sameeyay, hada waxaad ku arkeysaa aaladaha aad isku jaan qaadi karto hal meel, tanina waxay wanaajinaysaa khibrada iyaga la jirta, sida ay sheegtay shirkadda Huawei. Naqshaddani waxay aad ugu egtahay tan guddiga xakamaynta ee boosteejooyinka Apple, oo aan ahayn war xun. Waxaan sidoo kale leenahay guddi dhinacyo badan taabanaya, oo noo oggolaanaya inaan helno tuuryo (Samsung Edge style), waan awoodnaa alaabada kala badalano marka aan kala leenahay muuqaalka shaashadda, wax faa iido weyn u leh in waxyaabo badan la qabto isla waqti isku mid ah.
AppSearch: barnaamijyada Google
Raadinta, waa barnaamij mas'uul ka ah raadinta barnaamijyada gudaha ilo lagu kalsoon yahay inaad kala soo baxdo oo aad u isticmaasho. Tani waxay u oggolaaneysaa boosteejooyinka cusub ee aan lahayn adeegyada Google inay yeeshaan Facebook, Gmail, WhatsApp ama Instagram qaab fudud, wax ilaa iyo hadda ahaa madax xanuun, taas oo ay ugu wacan tahay diidmada diidmada ee ay dowladda Mareykanka ku wareejisay shirkadda Huawei.
Celia, kaaliyaha dalwaddii ee Huawei
Maqnaanshaha Kaaliyaha Google ee xarumahooda, ayaa ku dhawaaqday Celia, oo ka jawaabeysa amarka "Hey Celia." Kaaliyaha ayaa ka jawaabi kara su'aalaha, wuxuu sameyn karaa ballamo jadwalka iyo wicitaanada. Waxay sidoo kale tarjumi kartaa sawirada ama isticmaali kartaa AI si ay kuugu sheegto waxaad arkayso. Celia hadda waxay ku hadashaa oo keliya Ingiriisiga iyo Faransiiska, in kastoo Isbaanishka la filayo inuu yimaado goor dhow ama goor dambe.
Waa codsi wicitaan fiidiyow ah oo kuu oggolaanaya inaad ku xirto fiidiyow tayo leh 1080p asxaabtaada iyo sidoo kale Kuu ogolaanayaa inaad ku darto qalabka dibedda ee wicitaanada shirarka. Waxa ugu xiisaha badan ee MeeTime waa taas kuu ogolaanayaa inaad wadaagto shaashadda casriga ah, haddii ay dhacdo inaad rabto inaad wadaagto qoraallo ama bandhigyo.
Ikhtiyaar cusub oo ah wuxuu kuu ogolaanayaa inaad abuurto isku xirka webka si aad ula wadaagto faylasha kombiyuutarkaaga mobilkaaga. Xitaa waad u isticmaali kartaa kombuyuutarkaaga inaad kaga jawaabto taleefankaaga casriga ah. Tan waa inaan ku darnaa cusbooneysiinta Huawei Share, taas oo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si fudud u soo dirto sawiro aan fiiqnayn iyo faylal waaweyn, oo xitaa waad ku gudbin kartaa adoo adeegsanaya NFC oo leh laptops-ka Huawei. Wax la mid ah waxa aan ku aragno Apple Airdrop.
Shirkadda Huawei +
Hawsha cusub ee lagu daray ee na siineysa suurtagalnimada u dir mawduucaaga adoo adeegsanaya tikniyoolajiyad daahitaan yar oo qalabka kale ee Bluetooth ah. Fikradda ayaa ah in intaad ciyaareyso aad qorshayn karto sawirka adigoon luminayn faahfaahinta ciyaartaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » EMUI 10.1 Global Beta: Terminallada cusbooneysiiya iyo sida loo sameeyo
Tilmaamaha Guryaha ee Isku Xidhan: Doorashada Nalalkaaga Casriga ah